NLD မဲလိမ်တာကို သက်သေနှင့်တကွ ပြသွားမည်ဟု စစ်ကောင်စီ မင်းအောင်လှိုင်ပြော…. – Shwe Nay Chi
NLD မဲလိမ်တာကို သက်သေနှင့်တကွ ပြသွားမည်ဟု စစ်ကောင်စီ မင်းအောင်လှိုင်ပြော….
၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမှားယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော် အာဏာအားရယူခဲ့သည့် အပေါ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်မဲမှားယွင်းမှုများ နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာသံတမန်များကို ဖိတ်ခေါ်၍ ရှင်းပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားသည်သြဂုတ်လ၇ရက်နေ့နေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သောနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေး (၁၃/၂၀၂၁) တွင် အထက်ပါ ကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် သမ္မတရွေးချယ်သည့် ရွေ းကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ပြီး သမ္မတက အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တရားသူကြီးများစသည်ဖြင့်အတည်ပြုခန့်အပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေပြုရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရသူများဖြစ်သဖြင့် မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုများဖြင့် ရွေးချယ်ခံရခြင်းသည်
တရားမျှတမှု မရှိကြောင်း၊ မဲစာရင်းစိစစ်တွေ့ရှိမှုများအားရှင်းလင်းပေးရန်အတွက် ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ရှင်းလင်းပေးမှုမရှိခဲ့ကြောင်း၊ မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊
သံတမန်များကို ဖိတ်ခေါ်၍ အထောက်အထားများနှင့် တကွပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင် စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင်က ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် ယခင်အစိုးရ တာဝန်ယူသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ ကို အရေးယူရသည်မှာ နိုင်ငံရေးအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဥပဒေအား ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့်သာ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကဆိုသည်။
“မိမိတို့အနေဖြင့် ယခင် အစိုးရမှ တာဝန်ရှိသူများအား နိုင်ငံ ရေးအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဥပဒေချိုးဖောက်သည့် ပြစ်မှုများကြောင့်သာ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြေ ာင်း” နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားသ ည်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်ချိန် ဒီဇင် ဘာလနှင့် ဇန်နဝါရီလတို့တွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း
၎င်းတို့အနေဖြင့်ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီနောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်အပေါ်ဆန့်ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လာခဲ့မှုများရှိခဲ့ကြောင်း၊နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီ းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမွားယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာအားရယူခဲ့သည့္ အေပၚေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္မဲမွားယြင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ရွင္းျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒
ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကေျပာၾကားသည္ၾသဂုတ္လ၇ရက္ေန႔ေနျပည္ေတာ္ရွိႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ႐ုံးတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအစည္းအေဝး (၁၃/၂၀၂၁) တြင္ အထက္ပါ ကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ သမၼတေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး သမၼတက အစိုးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ တရားသူႀကီးမ်ားစသည္ျဖင့္အတည္ျပဳခန႔္အပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ားျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရျခင္းသည္
တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းစိစစ္ေတြ႕ရွိမႈမ်ားအားရွင္းလင္းေပးရန္အတြက္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းေပးမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တကြျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ယခင္အစိုးရ တာဝန္ယူေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ကို အေရးယူရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္သာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကဆိုသည္။
“မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခင္ အစိုးရမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္သာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈ
ဒီးမော့ဆို၌ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပို့ချသည့် Drone အသုံးပြုနည်းသင်တန်း အောင်မြင်စွာပြီးဆုံး…
ထမင်း ကြမ်းခဲစားပြီး 11.လပိုင်း အကုန်အပြီးတိုက် ထုတ်မယ်လို့ကြွေးကြော် လိုက်တဲ့ PDF လေးများ